Metal Wire Vagadziri - China Metal Wire Suppliers & Factory
Pvc Yakavharwa Wire
Tsananguro: Electro yakarongedzwa waya nePVC yakavharidzirwa kana Hot yakadzikwa waya yemagetsi ine PVC yakavharidzirwa. Chishandiso: Anonyanya kufarira kushandiswa kwePVC coated waya iri mune: cheni yekuunganidzira mafirita emahara ekuchengetedza maindasitiri, nzira dzakasununguka nematare tennis. Core Wire Dhivhi Outer Diimita 0.5mm (bwg25) ~ 4.0mm (bwg8) 1.0mm (bwg19) ~ 5.0mm (bwg6) Kusimba Kwesimba: 30 ~ 55kgs / mm3Color: Rima Girazi, Nyowani Nyowani, Dema, Ichena uye Etc.Packing: Mune 20 ~ 500kgs pane coil mutsara ne wax pepa kana PVC mitsetse ...
Chikumbiro: chakagadzirwa zvinoenderana nevatengi vedu 'zvinoda kunyanya kushandiswa waya waya kana kusunga waya mukugadzira., Waya mesh kugadzirwa uye vanhu vekunze indasitiri chigadzirwa kugadzirwa. Nhare yakasungirirwa waya inopa kunyatsochinja uye kupfava kuburikidza nemaitiro eoksijeni yakasununguka annealing. Assortment Wire Dhigirii Yakakwenenzverwa Isimbi Iron Wire 0.1mm (bwg36) ~ 5.1mm (bwg6) Yakajeka Iesimbi Iron Wire 0.1mm (bwg36) ~ 5.1mm (bwg6) Inesimba Kusimba: 30 ~ 55kgs / mm2Packing: In ...
Tsananguro: Kupisa Yakapukutwa Galvanized Wire ndiyo yekutanga waya zvigadzirwa zveBESTAR. inogamuchira sarudzo yakaderera kabhoni simbi. Masayizi akajairika anobva ku5 # kusvika makumi mana neshanu # Mamwe ma diameter aripo kuwanikwa kwevatengi sarudzo. Iyo inopisa-dip galvanized simbi waya kubva kusarudza yakaderera kabhoni simbi waya, kuburikidza nenzira yekudhirowa waya, anneal, asidhi kugeza, zinc plating, kutonhora uye zvobva zvapera. Iyo inopisa yakanyikwa waya dhizaini neyakajeka kuchinja uye kupfava. 2.) Electro Galvanized Wire iri ...
Zvigadzirwa zvakajairika ndezve galvanized kana stainless simbi. Yepakeji mapakeji zvigadzirwa anoratidzwa mumatafura ari pamusoro, akasarudzika akasarudzika aripo pane chikumbiro. Rondedzero: Kunze kweDhijitari Nha. YeLoops Standard Length paCoil Type manhamba 450mm 33 8M CBT-65 Imwe chete coil 500mm 41 10M CBT-65 Imwe chete coil 700mm 41 10M CBT-65 single coil 960mm 53 13M CBT-65 single coil 500mm 102 16M BTO -10.15.22 Muchinjika rudzi 600mm ...
Tsanangudzo: waya dzemabhata dzakabva kune dzakasiyana siyana zvinhu: Electro galvanized iron waya, inopisa-dip galvanized iron waya uye PVC yakavharidzirwa iron waya. Une ruzivo mubhandi waya, Sharp mutsara unonyanya kupa MOTTO Type Barbed Wire, PUMA Type Barbed Wire, IOWA Type Barbed Wire naRazor Type Barbed Wire uye Concertina Type Barbed Wire Fires. KUSHANDISA: Ma waya eBhabha zviri mawaya zvigadzirwa zvine zvakawanda zvakasiyana-siyana, sezvo zvichitendera kuti zviiswe pamusoro pemafirati waya kune mapurazi madiki nemasaiti. Waya yomunzwa ...